नेपाल आज | भक्तपुरमा तल सडक माथि घर (भिडियोसहित)
भक्तपुरमा तल सडक माथि घर (भिडियोसहित)
काठमाडौं । प्राचीन सहर भक्तपुर घुम्दै जाँदा भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर ७ स्थित गोल्मडी टोलको मानन्धर चोक पुग्यौं । मूलतः परम्परागत रुपमा तेल बिक्री गर्ने मानन्धरहरुको थाँतथलो रहेको यस क्षेत्रमा एक अनोठौ प्राचीन अन्डरग्राउन्ड बाटो भेट्यौं ।
यो बाटो कुनै समय बिल्कुल अध्याँरो वा साँघुरो गल्ली जस्तो थियो रे । स्थानीय दर्शन मानन्धरसँग हाम्रो भेट भयो । उनले अन्डरग्राउन्ड बाटो कसरी बन्यो ? किन बन्यो ? भन्ने कुराहरु हामीलाई संक्षिप्तमा बताए ।
दर्शनकाअनुसार उपत्यकामा उहिल्यैदेखि अहिलेको अपार्टमेन्ट झै गरी घरहरुको खण्डखण्ड बिक्री हुन्थ्यो । भूँइतल्ला सडकको नाममा राखेपछि मानिसहरुले त्यसभन्दा माथि घर बनाउँथे । पहिलो तल्लादेखि माथिको आफ्नो हुन्थ्यो भने भुईँतल्ला सार्वजनिक हुन्थ्यो । व्यक्ति व्यक्तिबीचको व्यवहार पनि त्यस्तै हुन्थ्यो ।
कुनै घरको भुईँतल्लामा रहेको पसल खरिद गर्नेले पसलसँगै त्यो पहिलो तल्लामा पसलले ओगटेको क्षेत्र पनि पाउँथ्यो । मन लागेको बेला घरधनीसँग स्वीकृति नलिई पसल अर्कैलाई पास गरेर हिँड्न पाउँथ्यो । अहिले यसखाले चलन हराउँदै गएको छ ।
ठीक यसै गरी मानन्धर चौकबाट बाहिर निस्कने यो अन्डरग्राउन्ड बाटो पनि तयार भएछ । टोलबासीहरु अहिले पनि यो बाटो हिँड्छन । बालबालिका, स्कुलबा विद्यार्थी पनि हिँड्छन्।
हेर्दा निस्पट्ट अध्याँरो भए पनि यो गल्लीमा कुनै अपराध नभएको दर्शनले हामीलाई जानकारी दिए ।
१० मिटरछिचोलेर हामी अर्को तिर निस्किएपछि हामीले भेट्यौं सत्यमाया कवाङलाई । । नेपाली भाषा बुझ्ने तर बोल्न नजान्ने उनलाई हामीले नेपालीमा प्रश्न गर्यौं । उनले नेवारीमा जवाफ दिइन् । नेवारी बुझ्न हामीलाई पक्कै गाह्रो भयो । तर दर्शन मानन्धरले यहाँ पनि हामीलाई मद्यत गरे । जसअनुसार उनले नेपाली भाषा बोल्न अहिलेसम्म आवश्यक नै नपरेकोले सिक्न नपरेको उल्लेख गरिन् ।
बुझ्न राम्रै बुझे पनि बोल्न गाह्रो हुने उनले सुनाइन् । र अन्डरग्राउन्ड बाटो बारे पनि कुरा गरिन् ।
उहिलेदेखि नै सडकलाई महत्व दिएर अन्तडरगा्रउन्डको कन्सेप्ट नेपालमा रहेछ । अपार्टमेन्टको कन्सेप्ट पनि नेपालमा रहेछ । तपाईलाई यो कन्सेप्ट र भक्तपुरका नेवारहरुको यो सभ्यता कस्तो लाग्यो ?